ဘယ်လိုတစ်ခုအိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာဖြစ် | USAHello ထံမှအလုပ်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
အိုင်တီသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအတိုကောက်. အိုင်တီအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကွန်ပျူတာများကိုအတူလုပ်ကိုင်တဲ့အလုပ်နှင့်သူတို့သိမ်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေနှင့်အသုံးပြုမှုကိုဆိုလိုသည်. တစ်ဦးကစီမံကိန်းမန်နေဂျာစီမံကိန်းများနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုတို့ကိုကျင့်သောစုစည်း. တစ်ဦးအိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာမည်.
တစ်ဦးအလတ်စား-size ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာဟာအိုင်တီစနစ်များကိုကြီးကြပ် (ကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ရက်များ) အားလုံးဌာန. သူသို့မဟုတ်သူမသည်နည်းပညာန်ထမ်းများကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးထွားလာအဖြစ်အသစ်သောစနစ်များကိုစီစဉ်နေ. အဆိုပါစီမံကိန်းမန်နေဂျာအားလုံးစနစ်များအလုပ်လုပ်သေချာနှင့်လုံခြုံစေသည်.
ဒီအလုပ်ကတခြားအမည်များဖြစ်ကြသည် ကွန်ပျူတာနှင့်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များမန်နေဂျာ သို့မဟုတ်ပဲ အိုင်တီမန်နေဂျာ. သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာပြောင်းလဲကြီးထွားအဖြစ် ပို. ပို. ကုမ္ပဏီများသည်အိုင်တီစီမံကိန်းကိုမန်နေဂျာကိုရှာဖွေနေပါသည်.
တစ်ခုကအိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာလူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံအချိန်အများကြီးသုံးစွဲ. ဤလူအများစုဟာကွန်ပျူတာ-related တာဝန်များကိုနှင့်စီမံကိန်းများကိုထွက်တင်ဆောင်နေကြသည်. အဆိုပါစီမံကိန်းမန်နေဂျာသေချာန်ထမ်းများအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိကြပြီးအချိန်ပေါ်မှာပြုစေသည်. အိုင်တီစီမံကိန်းကိုမန်နေဂျာလည်းပြုစီမံကိန်းများကိုချင်သူတွေကိုနှငျ့ဆကျသှယျ. သူတို့ကသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်မှသတင်းပို့နှင့်ရက်စွဲသူတို့ကိုတက်ကိုစောင့်ရှောက်.
သူတို့တက်လာသည့်အခါမဆိုစီမံကိန်းမန်နေဂျာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်တစ်ဦးအိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာဟာ့ဒ်ဝဲအတွင်းရှိပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်, ဆော့ဖျဝဲ, လုံခွုံရေး, သို့မဟုတ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကုမ္ပဏီ၏ကွန်ပျူတာကွန်ယက်.
အိုင်တီစီမံကိန်းကိုမန်နေဂျာကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအလတ်စားအရွယ်အလုပ်လုပ်. အဆိုပါအိုင်တီန်ထမ်း၏ကျန်နဲ့ရုံးခန်းထဲမှာအများစုကအိုင်တီစီမံကိန်းကိုမန်နေဂျာအလုပ်. တချို့ကအဝေးမှဗီဒီယိုနှင့်ဖုန်းကဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ. အများစုမှာစီမံကိန်းကိုမန်နေဂျာန်ထမ်းများမှာ, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေအလွတ်တန်းဖြစ်နိုင်သည် (တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စီမံကိန်းအတွက်ငှားရမ်းထား). စီမံကိန်းမန်နေဂျာအလုပ်ရှုပ်နေအချိန်များတွင်ရှည်လျားနာရီအလုပ်လုပ်ရန်.
စီမံကိန်း၏မန်နေဂျာများအတွက်လစာအတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းပေါ်မူတည်. ဒါဟာ ကနေပ္ပံ $60,000 သို့ $200,000 တစ်နှစ်, အများဆုံးမန်နေဂျာနှင့် ပတ်သက်. ဝင်ငွေနှင့်အတူ $140,000.
အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုလူတစ်ဦး၏တစ်ဦးကောင်းအိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာစေသည်? သငျသညျကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ပြဿနာများကိုဖြေရှင်း, နှင့်လူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်, ထို့နောက်အိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်နိုင်သည်.
ဂရိတ်ဆက်သွယ်ရေး - အိုင်တီစီမံကိန်းကိုမန်နေဂျာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရှင်းလင်းညွှန်ကြားချက်ပေးရမည်
ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ up-to-date ဖြစ်အောင်နားလည်မှု, ဆော့ဖျဝဲ, နှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
အဘယ်အရာကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း, လက်မှတ်နှင့်အတွေ့အကြုံမရှိဘူး အိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာs ကိုလိုအပ်?
တစ်ခုကအိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာတစ်ဦးဒီဂရီလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. အခြေခံပညာကွန်ပျူတာဒီဂရီသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများမှာ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, နှင့်ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာ.
စီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ်တစ်ဒီဂရီ (ဘယျအရာ) စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးအိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာဖြစ်လိုလျှင်တစ်ခု MIS ဒီဂရီကိုစဉ်းစားပါ. ဒါဟာအလုပ်ကောင်းစွာသင်လေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်.
သင်သည်သင်၏ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်မှာဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ကဤဒီဂရီတဦးအဘို့လေ့လာလို့ရပါတယ်. သင်တစ်နေ့တာအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်လည်းထိုအဒီဂရီများအတွက်အွန်လိုင်းလေ့လာလို့ရပါတယ်. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ နှင့် အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ အွန်လိုင်းတစ်ခု MIS ဒီဂရီလာပြီ.
တစ်ဦးကစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Professional က (PMP) လက်မှတ်ကိုသင်စီမံကိန်းများစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုသိပြသ.
CASP နှင့် CISSP လက်မှတ်များသင်အဆင့်မြင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုင်တွယ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီနေကြသည်ကိုပြသ.
သွက်လက်ခြင်းနှင့် SCRUM လက်မှတ်များသင်သည်များစွာသော software ကို developer များအသုံးပြုမူဘောင်ကိုသိသောကိုပြသ. ဤရွေ့ကားလက်မှတ်များကိုပြီးသားအိုင်တီပညာရှင်များနေသောလူများအတွက်များမှာ.
ဤသူအပေါင်းတို့သည်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်သူကိုပြီးသားအိုင်တီပညာရှင်များလူတို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏. သင်အမှန်တကယ်ကဤအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသလား? သငျသညျအခြို့သောဒေသများမှာအလုပ်မလုပ်ခဲ့လျှင်, ထိုကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အစိုးရအဖြစ်, သူတို့အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်. အိုင်တီအကြောင်းပိုမို Read နှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် နှင့် အိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာ၏အလုပ်အကြောင်းကိုစာရင်းဇယားများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာတွေ့.
သင်တစ်ဦးအိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာဖြစ်လာမီအိုင်တီအတွက်သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျအိုင်တီအတွက်အခြားအလုပ်နှင့်အလုပ်သင့်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုဆောင်ကြဉ်းခဲ့ကြပေမည်. သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသင်အစီအစဉ်များကိုတခြားမျိုးစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြ, သငျတို့သအိုင်တီရန်သင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များဆောင်ခဲ့ကြသည်.